Raha nandeha teny an-dalana izy ny volana Martsa vao tamin’ny herintaona dia nahatsapa fa tokony hiresaka amin’ny vehivavy iray izay tsy fantany akory. Niresaka taminy tamin’izay teny Anglisy hany tadidiny izy. Mpitsabo mpanampy ilay vehivavy izay nalefan’ny filohan’ny misiona tao amin’ny tanànany mba hitady trano sy toeram-pitsaboana ho an’ireo misiônera izay hiasa atsy ho atsy ao amin’io toerana io. Lasa mpinamana izy ireo rehefa niresaka. Nolazainy tamin’ireo misiônera ny momba ilay zatovolahy rehe